Orinasa Iray Manana Fifandraisana Amin’ny Minisitra Paragoainina no Mitarika Ny Fandripahana Ala Ao Amin’ny Faritra Chaco · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Septambra 2017 5:03 GMT
Ny saribao aondrana any Eoropa dia novokarina tamin'ny fanangonana hazo quebracho fotsy, hazo miavaka ao amin'ny faritra Chaco. Sary navoaka tao amin'ny Kurtural natolotry ny Earthsight ary nahazoana alalana.
Ity manaraka ity dia dika amin'ny teny Anglisy tamin'ny lahatsoratra tamin'ny teny Espaniola avy amin'i Jazmín Acuña, navoakan'ny Kurtural voalohany.
Ny faritr'i Chaco, izay mipaka any amin'ny faritra Paragoay, Brezila sy Arzantina, dia manana taha ambony indrindra amin'ny fandripahana ala, ateraky ny fitrandrahana ala hanaovana famokarana saribao sy ny fampiroboroboana ny tanim-bilona ho an'ny fiompiana.
Iray amin'ireo ampahany tompon'andraikitra amin'ity raharaha ity ny Bricapar, mpanondrana saribao lehibe indrindra any Paragoay. Ary fantatra fa toa manana ny ampahaefatry ny tahiry ao amin'ny Bricapar i Ramón Jiménez Gaona, minisitry ny fifandraisana sy ny asam-panjakana, araka ny filazan'ny fikambanana ONG Britanika Earthsight..
Nanaraka ny lalan'ny vokatry ny orinasa izay amidy any amin'ny tsena lehibe Eoropeana ho “vokatra maharitra” ireo mpanadihady ny miafina avy amin'ny fikambanana. Saingy nahita zava-misy hafa izy ireo rehefa tonga tao amin'ny foiben'ny famokarana saribao an'ny Bricapar tao amin'ny departemantan'i Boquerón. Nahita izy ireo tany fa ny tena tombombarotra voalohan'ny orinasa dia vokatry ny fanangonana hazo tsy misy anavahana tahaka ny quebracho fotsy.
Nanambara fisian'ny drafi-pihariana mandrisika ny fandringanana ala ao amin'ny faritra Chaco ny fanadihadiana lalina nataon'ny Earthsight. Raofina hanaovana saribao ny hazo, izay manamora ny fahazoana tany hanaovana fiompiana. Nohazavain'ny lehiben'ny foibe famokarana saribao ao amin'ny Bricapar, ao afovoan-tanànan'i Teniente Ochoa tamin'ny antsipirihany izany drafitra izany, izay hahazoan'ny orinasa akora voalohany, kitay, sy trano handoroany hazo ho lasa saribao.
An'ny Ivontoerana momba ny Fiahiana Ara-tsosialy ao Paragoay ny tany ary nahofa ho an'ny Irasa, orinasa iray misahana fiompiana, nanomboka tamin'ny taona 2008. Manana fifanekena maharitra 20 taona ny Irasa izay mamela azy hitrandraka ny ampahany telo amin'ny 18.000 hekitara – amin'ireo 200.000 hekitara izay an'ny fikambanana misahana ny fiarovana ara-tsosialy – ary nahazo alàlana avy amin'ny Ivontoeram-Pirenena misahana ny Ala mba hijinja ala ao amin'ny tany nanomboka tamin'ny taona 2009. Tamin'izany fotoana izany ihany, nitazona ny fifanarahana tamin'ny Bricapar nanomboka tamin'ny taona 2012 ity orinasan'ny biby fiompy ity mba hanapaka hazo ovaina ho arina.
Ao anatin'izany drafitra izany, izay mahatonga ny krizy ara-tontolo iainana mbola tsy nisy toy izany, nanjary “mpamokatra sy mpanondrana saribao lehibe indrindra ao Paragoay” ny Bricaparar, araka ny tenin'i Sebastián Gorostiaga, mpitantana ny varotra ao amin'ny Bricapar. Amidy eny amin'ny toeram-pivarotana lehibe any Alemaina, Espaina ary Angletera ny vokatra, araka ny fanambaran'i Guillermo Vega de Seoane, tale mpanatanteraka ao amin'ny Ibecosol, orinasa Espaniola mpanelanelana, tompon'andraikitra amin'ny fitsinjarana ny saribaon'ny Bricapar eny amin'ny tsena Eoropeana.
Araka ny tombatomban'ny Earthsight, tompon'andraikitra tamin'ny antsasaky ny fanondranana ny vokatra tao Pargoay tamin'ny tapany voalohan'ny taona 2017 ny Bricapar, ary nahazoana tombony teo amin'ny iray tapitrisa dolara isam-bolana ny varotra. Ary izany dia tamin'ny fotoana nanehoan'ny sary avy amin'ny zanabolana fa ao amin'ireo faritra izay misy ny fatan'ny Bricapar ao Teniente Ochoa, tany manana velaran-kianja filalaovam-baolina kitra eo amin'ny 10 eo no voakapa ala isan'andro, mampiseho ny ampahatelon'ny fitrandrahana ala atao ao amin'ny faritr'i Chaco isan'andro mba hamaliana ny filàna ara-tsaribaon'i Eoropa. Ny tahan'ny fandripahana ala ao amin'ny faritra amin'ny ankapobeny dia hazo fito isan-tsegondra no voakapa, araka ny tatitra avy amin'ny Guyra Paraguay, fikambanana tsy miankina, tsy mitady tombontsoa mpiaro ny tontolo iainana.
Noho ny fikarohan'ny Earthsight, nilaza tamin'ny gazety The Guardian ny tambajotran'ny tranombarotra lehibe Eoropeana iray, Carrefour, fa nanao ny fanadihadiany manokana ary nanapa-kevitra tsy hividy ny vokatra avy amin'ny Ibecosol, mpanelanelana an'ny Bricapar, mandra-pahavita an'izany. Ankoatra izany, namoaka fanangonan-tsonia izay nahavory sonia maherin'ny 133 000 ny ONG Rainforest Rescue, mitaky amin'ireo tsena lehibe Eoropeana tahaka ny Aldi, Lidl sy Carrefour mba handray “fepetra tsy misy hatak'andro” ka “hijanona tsy hividy saribao vita avy amin'ny fandringanana ny alan'i Paragoay intsony.”